ဒီလ ဘုန်းဘုန်း တို့ ပရဟိတကျောင်းလေးက မီတာခ သိန်း (၃,၈၂၆,၆၀၀) ကျတယ် တဲ့ | CeleTrend
Covid – 19 ကပ်ရောဂါကာလ မှာ စားစရာ မရှိပေမဲ့ လျော်စရာငွေတော့ရှာရအုံးမယ် ဒီလမီတာခ ၃,၈၂၆,၆၀၀ သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း နှစ်သောင်းခြောက်ထောင် ခြောက်ရာကျပ် မိဘမဲ့ကျောင်း နဲ့ စက်ရုံကြီး နဲ့ မှားကောက်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်မြန်မာနိုင်ငံက မီတာစာရွက်တွေက အလိုလို ကျနေတာ လားမသိ..မိတာဖတ်စာရေးငိုက်တာလား………………ဒီလိုတော့ မဖြစ်တော့ပုပေါ.
ယနေ့ ခေတ် မှာ နေရာ တော်တော် များများ လျှပ်စစ်မီး ရလာ ကြပါ ပြီ ။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ် အသုံး ပြုခ တွေ မီတာ ကုန်ကျ ခတွေ အကြောင်း လူအများ သိသင့်ပါ တယ် ။ဘယ်အရာ မဆို ကိုယ်တိုင် တွက်ချက် တတ်ရင် အလိုလို ချင့်ချိန် တတ် လာ မယ် နောက်ပြီး သူများ ညာတာ လဲ မခံရ တော့ ပါ ဘူး ။ ဦးဇင်းတို့ မီတာ တွက် တဲ့ အခါ အသုံး ပြုတဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း လေးတွေ ကို အရင် watt (ဝပ်) ဘယ်လောက် နူန်းစား လဲ လို့ သိရပါမယ် ။မီးလုံး တစ်လုံး ဆိုရင် 60 W လို့ ရေးထားပါ တယ် ။ 60 W ( ဝပ် ) ရှိတဲ့ အဲဒိ မီးလုံးလေး ကို နှစ်နာရီ တိတိ ထွန်းထားမယ် ဆိုရင် ( 60 ×2= 120 ) ၁၂၀ ပေါ့ ။ သူကို တို့ နာရီနဲ့ မြှောက်ပြီး သား ဖြစ်လို့ ဝပ် နာရီ ( Watt Hours = WH ) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ 1000 WH ကို 1 KWH (Kilowatt hour ) ဖြစ်လို့ တစ်ထောင် နဲ့ စားပါ က ကီလိုဝပ်ဟာဝါ ရပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ခုနက ၁၂၀ ကို ၁ထောင် နဲ့ စားရင် 0.12 ရမယ် အဲဒါ ကို မီတာခ ကောက်ခံ နူန်းတား ၃၅ကျပ် နဲ့ မြှောက်တဲ့ အခါ 4.2 ရပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် 60W မီးသီ လေးကို နှစ်နာရီ ထွန်းရင် ၄ ကျပ် ကျော်ကျော် ကျပါတယ် ။မီတာခ တွေ ကောက် ခံတဲ့ အခါ အိမ်သုံး နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးဆို ပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ် ။ အဲဒိ နှစ်မျိုး မှာ လဲ ယူနစ် အသုံးပြု့မူ့ အလိုက် အခ ကြေးငွေ ကွာပါ တယ် ။ ကိုယ် ဘယ်လောက် နူန်း မီတာ ခ အကောက်ခံရတယ် ဆိုတာ ဘောင်ချာမှာ ကြည့်ရင် သိနိူင်ပါ တယ် ။
မိမိ တို့ အသုံး ပြုနေတဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တိုင်း မှာ မီတာ စားနူန်းလေး တွေ ရေးထား တာ တွေ့ရပါ လိမ့်မယ် ။တစ်ကောင် အဲယားကွန်း 750 W ; ထမင်းပေါင်းအိုး 700 W ; လေးပေ မီးချောင်း 40 W ; အဲဒီလို လေးတွေ ပါတာ တွေ့မှာပါ။ပိုပြီး ရှင်းလင်း သွားအောင် ဦးဇင်း ပြပေး ထားတဲ့ ပုံလေး ကို ကြည့်လိုက် ပါ ။
Covid – 19 ကပျရောဂါကာလ မှာ စားစရာ မရှိပမေဲ့ လြျောစရာငှတေော့ရှာရအုံးမယျ ဒီလမီတာခ ၃,၈၂၆,၆၀၀ သုံးဆယျ့ရှဈသိနျး နှဈသောငျးခွောကျထောငျ ခွောကျရာကပျြ မိဘမဲ့ကြောငျး နဲ့ စကျရုံကွီး နဲ့ မှားကောကျတာတော့ မဖွဈနိုငျဘူးနဲ့တူတယျမွနျမာနိုငျငံက မီတာစာရှကျတှကေ အလိုလို ကနြတော လားမသိ..မိတာဖတျစာရေးငိုကျတာလား………………ဒီလိုတော့ မဖွဈတော့ပုပေါ.
ယနေ့ ခတျေ မှာ နရော တျောတျော မြားမြား လြှပျစဈမီး ရလာ ကွပါ ပွီ ။ ဒါကွောငျ့ လြှပျစဈ အသုံး ပွုခ တှေ မီတာ ကုနျကြ ခတှေ အကွောငျး လူအမြား သိသငျ့ပါ တယျ ။ဘယျအရာ မဆို ကိုယျတိုငျ တှကျခကျြ တတျရငျ အလိုလို ခငျြ့ခြိနျ တတျ လာ မယျ နောကျပွီး သူမြား ညာတာ လဲ မခံရ တော့ ပါ ဘူး ။ ဦးဇငျးတို့ မီတာ တှကျ တဲ့ အခါ အသုံး ပွုတဲ့ လြှပျစဈ ပစ်စညျး လေးတှေ ကို အရငျ watt (ဝပျ) ဘယျလောကျ နူနျးစား လဲ လို့ သိရပါမယျ ။မီးလုံး တဈလုံး ဆိုရငျ 60 W လို့ ရေးထားပါ တယျ ။ 60 W ( ဝပျ ) ရှိတဲ့ အဲဒိ မီးလုံးလေး ကို နှဈနာရီ တိတိ ထှနျးထားမယျ ဆိုရငျ ( 60 ×2= 120 ) ၁၂၀ ပေါ့ ။ သူကို တို့ နာရီနဲ့ မွှောကျပွီး သား ဖွဈလို့ ဝပျ နာရီ ( Watt Hours = WH ) လို့ ချေါပါတယျ ။ 1000 WH ကို 1 KWH (Kilowatt hour ) ဖွဈလို့ တဈထောငျ နဲ့ စားပါ က ကီလိုဝပျဟာဝါ ရပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ခုနက ၁၂၀ ကို ၁ထောငျ နဲ့ စားရငျ 0.12 ရမယျ အဲဒါ ကို မီတာခ ကောကျခံ နူနျးတား ၃၅ကပျြ နဲ့ မွှောကျတဲ့ အခါ 4.2 ရပါတယျ ။ ဒါဆိုရငျ 60W မီးသီ လေးကို နှဈနာရီ ထှနျးရငျ ၄ ကပျြ ကြျောကြျော ကပြါတယျ ။မီတာခ တှေ ကောကျ ခံတဲ့ အခါ အိမျသုံး နဲ့ လုပျငနျးသုံးဆို ပွီး နှဈမြိုး ရှိပါတယျ ။ အဲဒိ နှဈမြိုး မှာ လဲ ယူနဈ အသုံးပွု့မူ့ အလိုကျ အခ ကွေးငှေ ကှာပါ တယျ ။ ကိုယျ ဘယျလောကျ နူနျး မီတာ ခ အကောကျခံရတယျ ဆိုတာ ဘောငျခြာမှာ ကွညျ့ရငျ သိနိူငျပါ တယျ ။
မိမိ တို့ အသုံး ပွုနတေဲ့ လြှပျစဈ ပစ်စညျး တိုငျး မှာ မီတာ စားနူနျးလေး တှေ ရေးထား တာ တှရေ့ပါ လိမျ့မယျ ။တဈကောငျ အဲယားကှနျး 750 W ; ထမငျးပေါငျးအိုး 700 W ; လေးပေ မီးခြောငျး 40 W ; အဲဒီလို လေးတှေ ပါတာ တှမှေ့ာပါ။ပိုပွီး ရှငျးလငျး သှားအောငျ ဦးဇငျး ပွပေး ထားတဲ့ ပုံလေး ကို ကွညျ့လိုကျ ပါ ။